Litepanels သည် Gemini 2x1 Softlight ၏သယ်ဆောင်နိုင်သောစွမ်းဆောင်နိုင်မှုများကိုချဲ့ထွင်ပြီးဘက်ထရီနှစ်မျိုးသုံးထပ်မံတပ်ဆင်ခြင်း၊ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Litepanels နယူး Dual-ဘက်ထရီကွင်းစ, ကြမ်းပြင်ရပ် Kit များနှင့်ဖျ Carry ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်အတူ Gemini2× 1 Softlight ၏အိတ်ဆောင်ပါဝါစှမျးတိုးချဲ့
Litepanels နယူး Dual-ဘက်ထရီကွင်းစ, ကြမ်းပြင်ရပ် Kit များနှင့်ဖျ Carry ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်အတူ Gemini2× 1 Softlight ၏အိတ်ဆောင်ပါဝါစှမျးတိုးချဲ့
Los Angeles - ဇန်နဝါရီ 31, 2019 - ရွှေတောင်ပေါ်မှာသို့မဟုတ် V-တောင်ပေါ်မှာဘက်ထရီဖြစ်စေဘို့ dual-ဘက်ထရီ bracket ကတစ်ဦးကြမ်းပြင်ရပ်တည်ချက်ကိရိယာအစုံနှင့်ပျော့ပျောင်းသောတဖက်သတ်အတူသယ်မည့်အိတ်ကိစ္စတွင်: Litepanels ယနေ့မိတ်ဆက်င်း၏ဆုရ Gemini2× 1 များအတွက်အသစ်သုံးမျိုးဆက်စပ်ပစ္စည်းဖျ panel ကို LED ။
"ဒီအသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံစက်မှုလုပ်ငန်း '' အရှိဆုံးတိကျမှုနှင့်စွယ်စုံ softlight ရုံ ပို. ပင်စွယ်စုံသည်ဤသစ်ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ရတယ်," Byron ဘရောင်း, ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာ Litepanels ကဆိုသည်။ "သစ်ကို dual ဘက်ထရီ bracket က ENG နှင့် ENP applications များ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအပါအဝင်ခရီးဆောင်ပါဝါအပှေါအာဏာပိုမိုနှစ်သက်သည်အဘယ်မှာရှိအခြေအနေများအတွက် Gemini2× 1 ပို. ပင်လက်တွေ့ကျတဲ့စေသည်။ ထိုအခါသစ်ကိုကြမ်းပြင်ရပ်တည်ချက်နှင့်ပေါ့ပါးသယ်ကိစ္စတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်မိုဘိုင်းအလင်းရောင်ဖြေရှင်းချက်ပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းဗျူဟာကိုထောက်ပံ့သောအလွန်ကြီးစွာသောဖြည့်စွက်ပါ။ "
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမိတ်ဆက်, Gemini2× 1 အားလုံးအလွန်ခရီးဆောင်နဲ့ LED panel ကိုအတွက်တစ်ဦးပြောင်းလဲနေသောအလင်းရောင်နှင့်ရုပ်ရှင်သက်ရောက်မှုများကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းနှင့်တုန်ခါမှုတွေ-အခမဲ့ output ကိုတိကျစွာအရောင်ထိန်းချုပ်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အရှိဆုံးတိကျအဖြူရောင်အလင်းဖြစ်၏။ ယင်း၏အလွန်အမင်းအလင်းအလေးချိန်နှင့် onboard, လှေငြိမ်-အခမဲ့ power supply နှင့်အတူ, Gemini လည်း On-တည်နေရာအညွန့်မှာစိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူမသမာမှုများနှငဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
Gemini အမြဲ (ယှဉ်ပြိုင်အယ်လ်အီးဒီသာ 100 ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာလည်ပတ်နိုင်ပါတယ်) ဘက်ထရီစစ်ဆင်ရေးအပေါ်တဲ့အခါမှာ 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုအာဏာမှာလည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်, တစ်ခုတည်းသောယခင်မိုဘိုင်းပါဝါ option ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအနားယူနေတဲ့လေးလံသော, freestanding Cine ဘက်ထရီဖြစ်ခဲ့သည်။ အသစ် dual-ဘက်ထရီ bracket ကအလင်းကိုဖွင့်တင်သောထမ်းဘိုးကိုတိုက်ရိုက်နှစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်း-စံ 14.4V ထုတ်လွှင့်ကင်မရာဘက်ထရီ mounting က Gemini panel ကိုပါဝါသို့မဟုတ်ရပ်တည်ရန်သည်အသုံးပြုသူများအားဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ညီမျှခြင်းပြောင်းလဲစေပါသည်။
အဆိုပါ Gemini dual-ဘက်ထရီ bracket ကတစ်ဦးချင်းစီ 90 ကနေရုပ်ရှင်ရုံနှင့်ထုတ်လွှင့်ဘက်ထရီ onboard Anton / Bauer ရဲ့ Dionic XT အပါအဝင် 190 ဝပ်-နာရီ, အထိအရွယ်အစားနှစ်ခုဘက်ထရီထောက်ပံ့တစ်ဦးရွှေတောင်ပေါ်မှာသို့မဟုတ် V-တောင်ပေါ်မှာ version ကိုဖြစ်စေများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အသစ် bracket ကအထူးသအများဆုံးဘက်ထရီသက်တမ်းသေချာနှင့် Gemini2× 1 များအတွက်အထွတ်အထိပ်စွမ်းဆောင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အာဏာကို output ကိုထိန်းညှိဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့ပြီး, ထိုသို့တစ်ဦးကိုဆက်သွယ် cable ကိုပါဝင်သည်။ အဆိုပါ dual-ဘက်ထရီ bracket က $ 420, £ 300, € 375 နှင့် 48,000 ယန်းတစ်ခု MSRP မှာလက်ရှိတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်နံရံတစ်ခုတက်ပွင့်လင်း - Gemini2× 1 များအတွက်အသစ်ကြမ်းပြင်ရပ်တည်ချက်ကိရိယာအစုံကြမ်းပြင်အထိုင်တပ်မက်လိုချင်သောအရာ setting ဆိုထုတ်လွှင့်အတွက်စံပြ ENG, ဒါမှမဟုတ် EFP တည်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရပ်တည်ချက်ဟာအနိမ့်ပရိုဖိုင်းကို, အဆင်ပြေခြင်း, ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာသို့မဟုတ်အခြားအပြားမျက်နှာပြင်ဖို့ Gemini နေရာနှင့် / သို့မဟုတ် mount မှကြံ့ခိုင်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြမ်းပြင် mounting ကိရိယာအစုံဟာအထောက်အကူပေးဖို့ Gemini2× 1 ဖျ panel ကိုချိတ်ဆက်ဖို့လိုအပ်သောအားလုံးဟာ့ဒ်ဝဲပါဝင်သည်။ ဒါဟာ $ 450, £ 330, € 400 နှင့် 51,000 ယန်းတစ်ခု MSRP မှာလက်ရှိတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Litepanels ယခုတစ်ခုတည်း Gemini2× 1 ဖျ panel ကို၏လွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်ပျော့ပျောင်းတဖက်သတ်ပေါ့ပါးသယ်ကိစ္စတွင်ကမ်းလှမ်းနေသည်။ (Litepanels လည်းကုန်တင်သို့မဟုတ်အိတ်ကိုအဖြစ်အလင်းတင်ပို့များအတွက်ကြမ်းတမ်းလမ်းကိစ္စတွင်ကမ်းလှမ်း။ ) သစ်သယ်ကိစ္စတွင်တစ်အကြမ်းခံဇစ်ပိတ်သိမ်းတစ်ခုဆက်စပ်ပစ္စည်းအိတ်နှင့်ပခုံးသိုင်းကြိုးတို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါပျော့တဖက်သတ်အတူသယ်မည့်အိတ်ကိစ္စတွင် $ 365, £ 270, € 325 နှင့် 42,000 ယန်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Gemini 2X1 ဖျ panel ကိုအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက - ဤအသစ်က accessories များအားလုံးနှင့်အတူ - မှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.litepanels.com.
Litepanels တစ်ဦး Vitec Group မှအမှတ်တံဆိပ်, အနာဂတ်အတွက်မြင်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများ, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အသံ-အမြင်အာရုံစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် LED မီးအလင်းရောင်ရှေ့ဆောင်သူကိုငါးပရော်ဖက်ရှင်နယ် gaffers နှင့်အင်ဂျင်နီယာများအားဖြင့် 2001 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့Emmy®ဆုရနည်းပညာယခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဘဏ်ဍာထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပေါ်တွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းဖြစ်သည်။ Litepanels ခွက်တဆယ်နှင့်အလင်းရောင်ဒါရိုက်တာများအရမ်းလေးစားမိပါတယ်ကြောင့်တုန်ခါမှုတွေ-အခမဲ့, အရောင်-တိကျမှု, အပြည့်အဝ dimmable ပျော့အလင်းအိမ်၎င်း၏ suite ကိုချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်။ ဤရွေ့ကားပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတပြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလင်းရောင်အတွက်စံနှုန်းသစ်တခု setting, ပါဝါငွေစုနှင့်ရှည်သောအသက်နှင့်ကိုယ်အဘို့အပေးဆောင်နိုင်ပါ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာတွေ့နိုင်ပါသည် Litepanels.com.
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/TheVitecGroup/190131Litepanels.docx
ဓါတ်ပုံများဖို့ Link ကို:www.wallstcom.com/TheVitecGroup/Litepanels-GeminiBracket.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: အဆိုပါ Gemini2× 1 ဖျ Panel ကိုများအတွက် Litepanels Dual-ဘက်ထရီကွင်းပိတ်
ဓါတ်ပုံများဖို့ Link ကို:www.wallstcom.com/TheVitecGroup/Litepanels-GeminiFloorMount.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Litepanels ကြမ်းပြင်ဟာ Gemini2× 1 ဖျ Panel ကိုများအတွက် Kit ရပ်
ဓါတ်ပုံများဖို့ Link ကို:www.wallstcom.com/TheVitecGroup/Litepanels-SoftCarryCase.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: အဆိုပါ Gemini2× 1 ဖျ Panel ကိုများအတွက် Litepanels Carry ဖြစ်ရပ်မှန်
အဆိုပါ BSc ကုန်စည်ပြပွဲမှာ Litepanels သွားရောက်ကြည့်ရှု, 315 ရပ်
တွစ်တာပေါ်မှာ Share:twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]%20introduces%20new%20dual%20battery%20bracket%20and%20floor%20stand%20for%20Gemini%202×1%20%23gemini%20%23portablepower%20%23softlight%20%23litepanels%20%23vitecgroup%20%23cameratech%20%23antonbauer%20%20%23litbylitepanels%20-%20http://bit.ly/2Rru7iD
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ dual-ဘက်ထရီကွင်းပိတ် ကြမ်းပြင်ရပ် Kit Gemini 2x1 ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor LitePanels ခရီးဆောင်ပါဝါ soft Carry ဖြစ်ရပ်မှန် softlight တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Vitec Group မှ 2019-01-31
ယခင်: Riedel ရဲ့ Bolero နှင့်အတူဂျပန်အဆင့်မြှင့်မှုများ၎င်း၏ comm နှင့်အဆိုတော်ခွားစနစ်များအမျိုးသားကဇာတ်ရုံ
နောက်တစ်ခု: နယူး Videon EdgeCaster Edge Compute ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာက Ultra-အနိမျ့ကုန်ကျစရိတ်မှာက Ultra-အနိမျ့-latency တိုက်ရိုက်လွှဖွင့်မည်